Al-Shabaab oo mar kale Xasuuq ka geysatay gudaha dalka Kenya +Tirada dhimashada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Al-Shabaab oo mar kale Xasuuq ka geysatay gudaha dalka Kenya +Tirada dhimashada
MAREEG 7 July 2015
ararka aan ka heleyno degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, ayaa sheegaya in dad ka badan 16 qof lagu dilay weerar xalay saqdii dhexe Al-Shabaab ay ku qaadeen degmadaasi ,sidoo kale waxaa lagu dhaawacay 20 kale.
Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerarka ay ku qaadeen guri ay daganaayeen dad la sheegay in ay ahaayeen Kenyaati balse aan sicad loo sheegin sababta weerarkooda keentay.
Dadka la beegsaday ayaa lagu soo warramayaa in ay yihiin kuwa dhagaxa ka jebiya banaanka Mandheera . Ma jirto weli cid sheegatay mas’uuliyada weerarka, balse ururka Al-Shabaab ayaa horay weerarro noocan ah uga fulisay Mandheera.
Ciidamada Ammaanka dalka Kenya ayaa goobta soo gaaray waxaana la sheegay in hadda ay wadaan baaritaano ku aadan qaabkii uu falkaan u dhacay.
Axmed Fiqi “Dalka si kaloo wax looga bedeli karo ma leh, ilaa Villa Somalia wax laga bedelo”
Nicholas Kay oo soo saaray War ay Puntland u aragto gardaro la isla ogyahay